Laba Wasiir iyo sadex Agaasime oo loo geeyey Waaran-maxkamadeed Kadib markii Hanti-dhowrku ku eedeyey falal musuq-maasuq .. Maxaa Ka jira in la xidhay Wasiir Guribarwaaqo
Sunday March 24, 2019 - 03:19:56 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)-Baadhis iyo xog raadin ay shabakada Warar ee Xogreebnews.com ku samaysay xaqiiqada Warar caawa si weyn loogu faafiyey Baraha Bulshada, kuwasoo sheegayey in xabsiga loo taxaabay Wasiirka Wasaarada Warfaafinta Somaliland Cabdiraxman Guribarwaaqo, ayaa waxay shabakada Xogreebnews.com xidhiidh la samaysay qaar Kamid ah xubnaha qoyskiisa kuwasoo waxba Kama jiraan ku tilmaamay Warkaas.
Xubnaha qoyska Wasiir Guri barwaaqo waxay u sheegeen Xogreebnews.com in Warkaas ay maqlayeen saacadahabnaa, hase-yeeahee aanu waxba ka jirin.
Xubnaha qoyska Wasiirku waxa uu sheegay inuu hurdo Guriga wax dhibaato ahnaa aanu qabin, isla markaana Wararkaasi yihiin dacaayado aan sal Iyo raadtoona lahayn. Waxanay carabka ku dhufteen inay Maanta oo u dambaysay ay wada joogeen Madaxweynaha iyo Wasiir Guribarwaaqo.
Geesta kale Warar Madaxbanaan oo ay heshay Shabakada Xogreebnews.com, ayaa shaaca ka qaaday in masuuliyiin uu Kamid yahay Wasiir Guribarwaaqo loo geeyey Waaran maxkamadeed, masuuliyiinta oo wajihi doona Maxkamada, ayaa waxay iska difaaci doonaan eedo musuq-maasuq oo hanti dhowrku ka gudbiyey, waxanay Kala yihiin, Wasiirka Warfaafinta Cabdiraxmaan Guri barwaaqo.
Agaasimihii iska casilay warfaafinta
Agaasimaha guud ee Wasaarada Gaashandhiga
Agaasimaha guud ee Wasaarada Cadaalada. Ma jiro War sax ah oo ku saabsab dhinacyada, kaasoo si cad u sheegaya.